Kani waa astaanta cusub ee Pandora | Abuurista khadka tooska ah
Mid baa jira dagaal waali ah Waxaa ka mid ah adeegyada muusikada qulqulka kala duwan, kuwaas oo aan ka heli karno Spotify, Apple Music, Play Music ama Pandora. Amazon xitaa waxay ku biirtay dagaalkaas iyada oo leh Amazon Music aan xadidneyn.
Si aad uga soo dhex baxdo kooxahaas waaweyn, waa inaad raadisaa dhammaan fikradaha suurtogalka ah, midkoodna waa bilow astaan ​​cusub taasi waxay ku dareysaa cusub iyo muuqaal cusub astaantaas hore ee hore. Pandora waa wixii uu qabtay wuxuuna soo bandhigay waxa astaantiisa cusub tahay.
Pandora wuxuu go'aansaday inuu soo bandhigo astaan ​​cusub wuxuuna u yimid wakiil waxa adeegaagu bixiyo kuwa adeegsada ee raba inay helaan muusikada ugu fiican ee suurtogalka ah. Astaanta cusubi waxay u taagan tahay ka tagid weyn oo ka timid dadaalladii hore kuwaas oo badanaa ahaa midabbo fudud oo leh lahjad serif ah.
Sida Tony Calzaretta, madaxweyne ku-xigeenka adeegyada hal-abuurka ee Pandora, uu tilmaamay, astaanta ayaa u taagan astaanta firfircoon ee qaabka, midabka iyo qaabka. Sawirka GIF wuxuu soo bandhigayaa soo noqnoqoshada kala duwan ee astaanta Pandora ee dadka isticmaala ay filan karaan inay arkaan, laga soo bilaabo kuwa aadka u dheregsan illaa qaabka dhabta ah ee MTV ee 80-meeyadii.
Naqshaddan cusub ayaa loogu talagalay dadaalka Pandora is dhis suuqa sii kordhaya ee laga daawado muusikada khadka tooska ah. Iyadoo la adeegsanayo Spotify, iTunes RAdio, iyo Apple Music, waxaad u baahan tahay sawir ka turjumaya waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin kuwa la tartamaya.
Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan soo bandhigida astaan ​​cusub ayaa ah boggaaga wali waxay leedahay astaantii hore. Taas oo soo jeedinaysa in wax badan loo baahan yahay marka loo eego dib u qaabaynta astaanta, laakiin halkii laga bilaabi lahaa olole cusboonaysiin oo dhan si ay u awoodaan inay soo jiitaan isticmaaleyaal badan. Waddo loo maro astaanta cusub oo bixisa fikrado kale, cusub oo soo jiidasho leh.
Kani waa Euro soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Kani waa astaanta cusub ee Pandora, adeegga fidinta muusikada
Buugaagtii hore waxay isu beddeleen farshaxanno sheeko xariir ah